Ciidamo kala dhex galay dagaal beeleed ka scoday Xananbuure, Galgaduud - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaCiidamo kala dhex galay dagaal beeleed ka scoday Xananbuure, Galgaduud
Ciidanka xoogga dalka qeybta 21-aad ayaa ku guulaystay in ay joojiyaan dagaal beeleed shalay ka qarxay deegaanka Xanannuure ee gobolka Galgaduud oo u dhexeeyey maleeshiyaad beeleed deegaankaasi wada dega.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Xananbuure oo ahaa mid gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa waxaa dadkii ku dhaawacmay loo kala qaaday magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb oo ay beel ahaan ka soo jeedaan.
Ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la kala dhex dhigay labada dhinac waxaana la sheegayaa inay xabaddu gebi ahaanba joogsaday iminka.
Maamulka Galmudug oo ah wali maamul aan awood lahayn ayaan isagu awood u helin joojinta dagaalo beeleedka deegaankaasi iyo waliba in ay gurmad u fidiyaan maleeshiyaad deegaaneed la dagaalamay ciidamada ururka Alshabaab. Deegaanka Galmudug ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin isi soo taraya oo ay ka mid yihiin biyo la’aan haysata dadka reer Guuraaga ah, colaado u dhexeeya maleeshiyaad beeleedyo iyo waliba dagaal yahamiinta Alshabaab weeraro ka fuliya deegaano kaabiga ku haya magaalooyinka waawayn ee gobolka sida Dhuusamareeb iyo Cadaado.